ITOOBIYA: Xoogagga Tigreega oo dib u qabsaday magaalada Mekelle iyo xaaladda oo kacsan : Calanka.com
ITOOBIYA: Xoogagga Tigreega oo dib u qabsaday magaalada Mekelle iyo xaaladda oo kacsan
Wakaaladaha wararka caalamiga ah ayaa soo tebinaya in maamulka ku meel-gaarka ah ee dowladda Itoobiya ay u magacawday gobolka Tigray uu ku dhowaaqay xabbad joojin ka hirgasha gobolkaasi, taasi oo ay taageertay dowladda dhexe ee federaalka.
Wakaaladda wararka Associated Press ayaa soo tebisay in dowladdu ay si iskeed ah ugu dhawaaqday xabbad joojin degdeg ah.
Warka xabbad joojinta waxaa xaqiijisay warbaahinta taageerta dowladda Itoobiya.
Wakaaladda wararka ee AFP ayaa sidoo kale soo tebisay in maamulkii ay dowladda Itoobiya u magacawday gobolka Tigray ay ka baxeen magaalada Mekelle ee caasimadda gobolka Tigray, iyadoo dhinaca kalena ciidamo la baxay Tigray Defense Forces ay galeen magaalada.
Af-hayeenka TPLF Getachew Reda ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in ay gacanta ku dhigeen magaalada Mekelle.
Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in xabbad-joojintu ay socon doonto illaa dhammaadka xilliga beer falashada, waxayna sheegtay in ujeeddadu tahay in beeralaydu ay helaan fursad ay ku qotaan dhulkooda. Dowladda ayaa ku amartay dhammaan hay’adaha federaalka in loo hoggaansamo xabbad joojinta.
Dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa Tigray ayaa bilowday bishii November ee sanadkii hore markaasi oo dowaddu ku eedaysay ciidamada mamaulka Tigray in ay weerareen taliska waqooyi ee saldhiggiisu ahaa gobolka Tigray.
Bilihii lasoo dhaafayna dagaallo culus ayaa laga soo sheegayey gobolkaasi. Sidoo kale hay’adaha xuquuqda aadanaha ayaa iyagu daabacay warbixinno eedo xadgudubyo ka baxsan xuquuqda aadanaha ah oo ay tilmaameen in ay ku kaceen ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea. Itoobiya iyo Eritrea waxa ay beeniyeen eedahaas.